Beeshan haddeer Habar Jecle ah, waxa la odhanjirey Habar Toljecle ama Toljecle, oo sidaas aya'ay ku wada mideysneyd, oo isku deegaan u wada ahayd, oo isku taariikh u wada ahayd, oo isku mid u wada ahayd.
Ha'se ahaata'e, muddo aan dheereyn, oo sidaas aan fogeyn, aya'ay beeshu magacan Habar Jecle ay la baxdey, oo magaceedii hore ee Habar Toljecle ama Toljecle ay ka diga'rogatey.
Beesha oo magacaas Habar Toljecle ama Toljecle isku wada ah, aya'u dagaalkii sokeeye ee Aadan Maxamed (Aadan-madoobe) iyo Yeesif Maxamed uu bilaabmey. Ka bacdi, beeshii Habar Toljecle ama Toljecle oo isku duuban ayaa Yeesif Maxamed la soo safatey.
Muddo 50 sano ku dhawaad ah markii uu dagaalkaas'i socdey, ayaa beeshii Aadan-madoobe laga adkaadey oo lagu kala jabiyey; oo lagu kala qaxiyey. Kala firidhkaas beeshii Aadan-Maxamed ka dib, ayaa beeshii isku midka ahayd ee Habar Toljecle ama Toljecle la isku odhanjirey, ayaa laba magac loo kala adeegsadey. Qeybtii badneyd ee bari, magac cusub oo Habar Jecle la yidhaahdo aya'ay la baxdey. Qeybtii yareyd ee galbeedna magacoodii hore ee Toljecle, aya'ay ka hadhi weydey; oo ay iska deysatey.
Si kasta ha ahaata'e, bari iyo galbeed waa beel isku mid ah. Laakiin waa beel ay daneystayaal aan midnimadeeda jecleyn'i, ay soo kala dhex galeen, oo kala shaki ku dhex abuureen, oo sheydaan kala dhex dhigeen.
Waa beel isku mid ah, oo la kala qeybiyey, oo la kala jeediyey, oo wax aan micno lahayn, oo dan aan u ahayn lagu kala mashquuliyey. Waa beel tuhun iyo murran lagu kala fogeeyey, oo wada'jirkeedii la majara'habaabiyey.
Sidaas darteed, waa inay beeshu wada fahamtaa, inay markii hore'na Habar Toljecle ama Toljecle ay isku wada ahaaayeen, haddeerna Habar Jecle ay isku wada yihiin.